အိမ်တွင်းရေး ဆူပူမှုမရှိပဲ သာယာစေချင်ရင် ….! (ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များအတွက်) – BaHuTuTa
အိမ်တွင်းရေး ဆူပူမှုမရှိပဲ သာယာစေချင်ရင် ….! (ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များအတွက်)
ဘုရားပန်းကို အညှိူ းမခံပါနဲ့.. သောက်တော်ရေကိုလည်း အနွေးမခံပါနဲ့.. ဂါထာတွေ မန္တာန်တွေ ပါးစပ်ကအမြုပ်ထွက်အောင်ရွတ်နေစရာမလိုပါဘူး..ဘုရားပန်းကို အမြဲတမ်း လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်ထားမယ်… သောက်တော်ရေချမ်းကို အမြဲအေးနေအောင် ထားမယ်ဆိုရင် အိမ်တွင်းရေး အေးချမ်းပါတယ်..
အိမ်မှာအမြဲနေရတဲ့သူတွေဆိုရင် …….မိမိရေသောက်တိုင်း ဘုရားကို သောက်တော်ရေ လဲပြီးကပ်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်..အဲဒီလောက်ကြီးအထိ မလဲနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ မနက်တစ်ခါ နေ့လည်တစ်ခါ ညနေတစ်ခါ တစ်နေ့သုံးကြိမ်လောက်တော့ ကပ်သင့်ပါတယ်..
ငါအလုပ်များတယ် အိမ်မှာလည်းနေရတာနည်းတယ်ဆိုပြီး သောက်တော်ရေ မကပ်နိုင်ဘူးလို့လည်း မပြောလိုက်ပါနဲ့..ဘယ်နေရာမှာမဆိုမိမိရေသောက်တိုင်း ပါးစပ်ထဲမထည့်ခင် ကိုယ်သောက်မယ့်ခွက်ကို လက်နဲ့ကိုင်ထားပြီး “မြတ်စွာဘုရားအား သောက်တော်ရေ လှူဒါန်းပါတယ်”လို့ စိတ်က အာရုံပြုပြီး ကပ်လို့ရပါတယ်……ဘုရားရှေ့သွားကပ်နိုင်မှ မဟုတ်ပါဘူး……ဒါဟာ ငွေမကုန်ပဲ အလိုလိုရနေတဲ့ ကုသိုလ်ပါ……
သောက်တော်ရေ တစ်ခုတည်းမှ မဟုတ်ပါဘူး..ဘာပဲစားစား မြတ်စွာဘုရားကို အာရုံပြုကပ်ပြီးတော့မှ စားပါတယ်(နေ့၁၂နာရီမကျော်သေးရင်)မစားခင် သရဏဂုံ သုံးကြိမ် ရွတ်ပါတယ်……သရဏဂုံရွတ်နေတဲ့အချိန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘုဉ်းပေးနေတဲ့အချိန်လို့ သဘောထားလိုက်ပါတယ်..ရွတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှ “အရှင်ဘုရား ဘုဉ်းပေးပြီးပြီဖြစ်လို့ တပည့်တော်ကို ဆေးအဖြစ်စွန့်တော်မူပါဘုရား” လို့စွန့်ပြီး စားပါတယ်..
ဒီနေရာမှာ ပြောစရာတစ်ခု ရှိလာပါတယ်.. တစ်ချို့လူတွေက ဆွမ်းတော်စွန့်တာစားရင်ဘုန်းနိမ့်တယ် ဉာဏ်ထိုင်းတယ်ဆိုပြီး မစားကြပါဘူး…..တစ်ကယ်တော့ ဒီစကားဟာသထုံဘုရင် မနုဟာမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီး ပေါ်လာတဲ့ စကားသာဖြစ်ပါတယ်..
မနုဟာမင်းဟာ စကားပြောရင် အာခံတွင်းကအရောင်ဝင်းဝင်းတောက်တဲ့အထိ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ဘုရင်တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်..သူဟာ လောကီအစီအရင်များနဲ့ စီမံထားတဲ့ ဆွမ်းတော်ကျကို စားမိသည့်အတွက် အာခံတွင်းမှအရောင်များ ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်..ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ ဆွမ်းတော်ကျစားခြင်းကြောင့် မဟုတ်ပါ..လောကီအစီအမံကြောင့် သော်လည်းကောင်းထည့်ကျွေးသည့်မနောလင်ပန်း မသန့်ရှင်းသောကြောင့်လည်းကောင်းပျောက်ကွယ်ခဲ့ရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်..
ေေေ နောက်တစ်ခုက မသိနားမလည်ကြတဲ့ကလေးတွေဘုရားရှင်အတွက် ကပ်လှူထားတာတွေကိုယူစားမှာ စိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးမိဘတွေကမစားဝံ့အောင် ခြောက်လှန်တားမြစ်ထားခြင်းကြောင့်ဆွမ်းစွန့်ပြီးလည်းမစားဝံ့ မစားရဲဖြစ်သွားကြတာပါ..
ရှေးကဆရာတော်ကြီးများဆိုရင် ဆွမ်းခံကြွပြန်လာပြီးရင်သပိတ်အတိုင်းဘုရားရှင်ကို ဆပ်ကပ်ပြီးမှသပိတ်ကိုစွန့်ပြီး ဘုဉ်းပေးလေ့ရှိပါတယ်တဲ့..
ဆွမ်းတော်စွန့်တာစားရင် ဉာဏ်ထိုင်းတယ်ဘုန်းနိမ့်တယ်လို့ကျမ်းဂန်များထဲမှာ မိန့်တော်မမူခဲ့ပါဘူး..လို့ ဆရာတော်များ၏တရားများ စာအုပ်များမှာနာဖူး ဖတ်ဖူးပါတယ်..
ဒီလောက်ဆို အတုမရှိမြတ်ဗုဒ္ဓကို အာရုံပြုကပ်လှူပြီးမှစွန့်ပြီးစားတာဟာကောင်းမကောင်း သင့်မသင့် ဆိုတာကို မိမိတို့၏ဦးနှောက် အသိဉာဏ်က ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
Credit: အလင်းတန်းတို့ ဆုံမှတ်
တစ်နေ့ကို ထမင်း ၁၀၀ ဖိုးသာ စားရတဲ့ အသက် ၉၀ ကျော်အဖွားအိုရဲ့ သနားစရာဖြစ်ရပ်